3 ukwazi mayelana neziphepho | Isimo Sezulu Senethiwekhi
I-Las izivunguvungu Ziwumbukiso omangalisayo, kepha ngabe wazi konke ngazo? Iqiniso ukuthi kunezinto eziningi ezingasimangaza, kanti ezimbalwa zinokuningi okuphathelene nalezi zimo zezulu ezikhanyisa isibhakabhaka, ngisho nasehlobo.
Ngokulandelayo ngizokutshela eyodwa 3 ukwazi mayelana neziphepho lokho, mhlawumbe, kukwenza uzibone ngamehlo ahlukile.
1 Umbani ungashaya izindiza
2 Uma ubanjwa isivunguvungu, awukwazi ukwenza isethi ethile yezinto
3 Ehlobo kuneziphepho
Umbani ungashaya izindiza
Yebo, impela: bangawa, kepha akukho okuzokwenzeka. Ingxenye engaphandle yebhanoyi, emboza umzimba, yenziwe nge-aluminium, okuyinsimbi eqhuba ugesi ngendlela egcina ihlale ingaphandle, nokuyivimba ukuthi ingangeni ngaphakathi. Yebo, kufanele igcinwe isesimweni esiphelele, ngaphakathi nangaphandle, ngoba kungenjalo kungaba nezinkinga, njengoba kwenzeka endizeni yePanAm ngo-1963.
Uma ubanjwa isivunguvungu, awukwazi ukwenza isethi ethile yezinto
Kukangaki uzwile ukuthi awukwazi ukuthinta ngqo izimbobo zepulagi ngesandla sakho, futhi noma ngaphansi uma kumanzi? Lokhu kunesizathu sokuba khona, futhi lokho ukuthi amanzi angumqhubi omuhle kakhulu kagesi, okuthi uma uhlangana nezandla zethu, angathathi lutho ukufinyelela inhliziyo futhi okungenani asibangele ukwesaba okukhulu. Kwenzeka into efanayo nangezivunguvungu: Awukwazi ukusebenzisa noma iyiphi into kagesi, noma iselula, futhi awukwazi ukukhuluma nocingo lwasendlini.
Kuyahlekisa, akunjalo? Kepha yebo, yebo. Ehlobo kuneziphepho. Kungani? Yebo, lokhu kungenxa yokuthi umoya uyashisa ngenxa yamazinga okushisa aphezulu ngakho-ke iba lula ngakho ikhuphuka ngokushesha futhi iyanda. Ngakho-ke, ihlangana nenqwaba yomoya obandayo, okwenza la mathonsi ajiye. Ngenxa yalokhu kuqhathaniswa kokubanda nokushisa, izivunguvungu zivela ukuthi, yize zivame ukuhlala isikhashana, zinamandla kakhulu.
Uyazazi lezi zinto ngeziphepho?
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » 3 ukwazi mayelana neziphepho